Solus 2.0 inosvitsa Sol package maneja | Linux Vakapindwa muropa
Solus 2.0 inosuma iyo Sol package package
Solus OS ichauya kune yayo vhezheni Solution 2.0, izvo zvinounza dzimwe nhau dzinonakidza. Mushure mekumirira kwenguva refu, Josh Strobl anobva kuSolus Project akapa zviratidzo zvehupenyu uye akazivisa dzimwe nhau dzichabatanidzwa mune iyi vhezheni itsva ichauya kwatiri kubva kune yakakurumbira distro. Imwe yeshanduko dzakakosha ndeye new package package iyo Solus 2.0 ichabatanidza, ndiSol, inozotsiva yekare eopkg package maneja.
Dare rekuvandudza rinotungamirwa naIkey Doherty yakashanda nesimba kune iyi nyowani vhezheni yeiyo inoshanda system iyo inovimbisa kufambira mberi kukuru. Icho chinangwa chevagadziri ndechekuti Sol kutsiva eopkg uye nekuvandudza maficha. Iko kumisikidza kwaitwa uchishandisa C programming mutauro uye inovimbisa kutora mukana wezvimiro zvemazuva ano maCPU, pamwe nekupa yakareruka dhisiki mbiri. Gamuchira kuvandudzwa ...
Sekutaura kwaDoherty, havana kumira kunatsiridza Solus OS, uye vari kuisa hwaro hwaSolus 2.0, nepo vashandisi vava kugona kunakidzwa neshanduro yeSolus 1.2. Usatombo kunetseka nezvekuenderana, Sol ichaenderana neeopkg, asi iwe uchaona kumhanyisa uye kumwe kugadziridza kuchanyatso kuoneka. Chiitiko icho chirongwa chiri kuwana pamusoro pemwedzi chakakwanisa kubvumidza Solus kuti awedzere kukura uye kudzivirira kuita zvikanganiso zvevatanga kana kutora nzira dziri nani dzeramangwana reprojekti.
Zvakare, kana iwe watove kufarira iyo budgie desktop nharaunda, ikozvino vagadziri vanovimbisa kuinyorazve muC zvachose kuti vawane kuita vachipesana nemutauro weVala unoshandiswa nhasi. Pamusoro pezvo, vabatsiri veapplet vanozoona mashandiro uye hunhu kuvandudzwa nemabhugi mashoma pasina kutyora kodhi yavo. Ipo izvi zvese zvichiitika, timu iri kushanda yakananga padyo Solus 1.2.1 vhezheni, iyo inofanirwa kuoneka pakati paJuly kune vese vashandisi vanoda Solus zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Solus 2.0 inosuma iyo Sol package package
Luis Jimenez akadaro
NDINODA KUTI NDIVANYANISEI NAVO NDIVAEDZEI KUTI VANYANZWE NEZVINOGONESESA MAPROGRAMU, NEKUTI PAKUTANGA KUONA SYSTEM YANDIRI MURUDO INONYANYA KUKOSHA uye YAKANGOKOSHA KUSHAYA ZVIKUMBISO KUTI UIENDE KUNE CHINOTEVERA CHEMAFUNGIRO NEVAPEDZISI Vashandisi.
NDINODA KUTI NDINODA MUTUNGAMIRIRI PAMASHURE PAZVO ZVINO.
Pindura kuna Luis Jimenez
Nhema Mesa inopesana neanopesana neLinux troll
3 manomano ekuti isu Chromium browser ikurumidze